Izinhlayiya zemvelo zomkhathi zinciphisa izinga lokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Leso yisiphetho esafinyelelwa yithimba lososayensi bamazwe omhlaba, eliholwa yi-University of Leeds, e-United Kingdom. Izinhlayiya ezisemkhathini ziyakwazi ukuguqula isimo sezulu seplanethi yoMhlaba, ngokumunca noma ukukhombisa ukukhanya kwelanga. Lezi zinhlayiya zikhiqizwa yizimoto nangemboni, kepha kukhona futhi lezo ezikhona ngokwemvelo emkhathini weplanethi.
Ngokwesifundo abasishicilele kumagazini wesayensi 'I-geoscience yemvelo', ngeminyaka efudumele ziyapholisa isimo sezulu, ngaleyo ndlela kunciphisa izinga lokufudumala kwembulunga yonke.
Ukufika kulokhu okutholakele, abacwaningi bahlanganisa ukukala komkhathi nemodeli yekhompyutha ukuze babeke imephu imiphumela yomusi ovela emlilweni wehlathi kanye namagesi akhishwa yizihlahla. Ngakho-ke, babekwazi lokho ''njengoba iplanethi ifudumala, izitshalo zikhipha amagesi ashintshashintshayo emaqabungeni awo, amagesi, ngokwesibonelo, anikeza amahlathi kaphayini iphunga likaphayini. Uma esemoyeni, la magesi zingakha izinhlayiya ezincane»Ekhombisa amandla enkosi yelanga. Ngenxa yalokho, umhlaba uyaphola, ngokusho kukaDkt. Catherine Scott, umbhali oholayo walolu cwaningo.
Lokhu kupholisa, okwaziwa njengempendulo yesimo sezulu esingesihle, ngaleyo ndlela kunxephezela ukwenyuka kwezinga lokushisa. Amahlathi asebenza njengama-air conditioner futhi anciphisa ukufudumala ngenxa yokukhishwa kwegesi yokushisa.
Ngokwakhe, uDominic Spracklen, ongumbhali wombhali walolu cwaningo, uthe "ngokujwayelekile, ukusabela kwesimo sezulu ekufudumaleni kokuqala ukukhulisa lokho kufudumala, okungukuthi, impendulo enhle"; noma kunjalo, "ukuncishiswa kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuyadingeka ukugwema amazinga ayingozi okushisa komhlaba".
Ukuze ufunde kabanzi ngalesi sihloko esithandekayo, sincoma ukwenziwa chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinhlayiya zemvelo zomkhathi zinciphisa izinga lokushisa komhlaba
Yiziphi izindawo ezinamakhaza kakhulu eSpain?